Am-polony maro ny olona maty voadona tamin'ny bus bus
Home » Vaovao momba ny fitaterana » Am-polony maro ny olona maty voadona tamin'ny bus bus
Aogositra 1, 2017
Olona 34 farafahakeliny no maty rehefa nisy bus iray nitondra tanora mpivavaka kristianina nianjera tamina hantsana mideza iray tao afovoan'i Madagascar, hoy ny tompon'andraikitra amin'ny polisy sy ny hopitaly ny talata teo.
Nilaza ny polisy fa fatin'olona 12 may kila forehitra mafy no nisaina tao amin'io toerana io, 70 kilaometatra avaratry ny renivohitra Antananarivo.
Nilaza ny hopitaly fa maty 22 hafa no voamarina taorian'ny fianjeran-tany.
"Niezaka mafy ny fiara fitateram-bahoaka hihanika lalana iray teo an-tampon'ny havoana ary nianjera tamin'ny lohasaha sahabo ho 20 metatra ny halavany", hoy ny mpitondra tenin'ny polisy Herilalatiana Andrianarisaona.
"Nirehitra izy io taorian'ny nanodinana azy imbetsaka."
Ny hopitaly lehibe eto Antananarivo renivohitra dia nilaza fa niisa 18 no maty, raha hopitaly iray tao an-tanànan'i Ankazobe no nitondra ny lozam-pifamoivoizana fa olona efatra no maty.
Nandeha avy tao afovoan-tanànan'i Soavinandriana ireo mpandeha tao anaty fiara fitateram-bahoaka ary nankany amin'ny fivorian'ny fiangonana tao amin'ny tanànan'ny seranan-tsambo avaratra andrefana any Mahajanga no nitrangan'ny loza.
Manatevin-daharana ireo andian-tafika Crystal AirCruises i Crystal Skye
Nanangana fampielezan-kevitra vaovao ny fizahantany US Virgin Islands